FITSIDIANA ARA-POMBA FANAJANA.
Published Date: 30 mai 2022
⚖ FITSIDIANA ARA-POMBA FANAJANA.
📌Fitantanam-bola madio no ilaina. Izay no tena votoatin’ny resaka nifanaovan’ireo solontena mpamita iraka avy ao amin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena na “Fond Monaitaire Internationale” (FMI) izay nanao fitsidihana ara-pomba fanajana tao amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François teto Faravohitra anio hariva 30 Mey 2022.
➡️Anisan’ireo mpanohana ara-bola amin’ny sehatra maro samihafa ny FMI eto Madagasikara, ary nasongadina nandritra ny fitsidihana ny hanamafisana ny fitantanam-bola araka ny tokony ho izy ,sy ny ady amin’ny kolikoly.
💡Atolotra anao ny fanazavana entin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François sy ny « Chef de mission du FMI Madagascar » , A/toa Frédéric Lambert.
📸 Pejy an-tsary 30 Mey 2022.
🇲🇬 ⚖️ Fananganantsaina natao teny Antanimora.
Toy ny isakin’ny Alatsinainy faran’ny volana, dia teto amin’ny Fonjamben’Antanimora­ no nanatontosana ny fananganantsaina, niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny izay notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François.
Fihaonan’ny Ministry ny Fitsarana tamin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny Fitsarana Miady amin’ny Kolikoly Mahajanga.
Published Date: 27 mai 2022
📸 Pejy an-tsary 27 Mey 2022.
👉 Fihaonan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, tamin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny Fitsarana Miady amin’ny Kolikoly “Pole Anti-Corruption” (PAC) eto Mahajanga. Nohamafisiny tamin’izany ny fanatsarana ny fomba fiasa.
FOTOAM-PITSARANA MANETRIKETRIKA FAMETRAHANA NY TONIA MPAMPANOA LALANA ETO MAHAJANGA.
⚖️ FOTOAM-PITSARANA MANETRIKETRIKA FAMETRAHANA NY TONIA MPAMPANOA LALANA ETO MAHAJANGA.
📌 Haingam-mpiasa, manaja ny zon’olombelona , miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ary Fitsarana atokisana sy akaikin’ny vahoaka no tanjona hoy ny Tonia Mpampanoa Lalàna (Procureur de la République) vao napetraka teto amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany eto Mahajanga anio 27 Mey 2022, A/toa IMBIKI Cléridès.
✅ Vonona hiatrika ny asa ary efa za-draharaha raha ny tenany satria efa Tonia mpampanoa lalàna tao Antsiranana ny Tenany. Nahavita nahatratra ny tanjona napetraky ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ny fanenjehana ny raharaham-pitsarana (ratio condamné/prévenu) ho 70/30.
💡Atolotra anao ny sombin’ny lahatenin’ny Tonia Mpampanoa Lalàna, A/toa IMBIKI Cléridès.
Fametrahana galona ho an’ireo Mpandraharahan’ny Fonja.
📸 Pejy an-tsary 27 Mey 2022
👉 Fametrahana galona ho an’ireo Mpandraharahan’ny Fonja miasa eo anivon’ny Fitaleavam-paritry ny Fandraharahana ny Fonja Boeny : « 1 Contrôleur d’Administration Pénitentiaire, 4 Greffiers Comptable, 14 Agents Pénitentiaire » izay natrehan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François sy ireo delegasionina mpiara-miasa aminy.